landa u-Isipheqi sewebhu se-Opera Mini ngu-Opera apk yakamuva kakhulu app yamadivayisi we-android
Ukushesha: ukulondolozwa kwedatha/ukuvimba kwesikhangiso/ukwabelana ngamafayela.
<b>Isiphequluli se-Opera Mini se-Android sikuvumela ukuthi wenze yonke into oyifunayo ku-inthanethi ngaphandle ngokumosha icebo lakho ledatha. Kuyisiphequluli esisheshayo, esiphephile esikulondolozela amadatha amaningi.</b>
► <b>Vimbela izikhangiso</b> - I-Opera Mini inesivimbeli sesikhangiso esakhelwe ngaphakathi, ukuze ukwazi ukusesha iwebhu ngaphandle kokuphazanyiswa izikhangiso.
► <b>Kuyashesha futhi kulula ukuhlanganyela amafayela</b> - Thumela futhi wamukele amafayela ngokuphepha ngaphandle kokuxhuma kuyi-inthanethi noma ngokusebenzisa noma yimaphi amadatha. Hambisa umculo, amavidiyo, izithombe noma yimaphi amafayela ngesivinini esikhulu, kuze kufike ku-300MB/s, kwenza kube lula ukuhlanganyela amafayela noma yikuphi! Skena ikhodi ye-QR bese uhlanganyela nanoma yibaphi abasebenzisi be-Opera Mini ngemizuzwana nje. Lesi yisiphequluli sokuqala nokuwukuphela kwaso esinikeza isici sokuhlanganyela ifayela nge-app.
► <b>Engeza esikrinini sasekhaya</b> - Engeza amasayithi owavakashela kakhulu esikrini sakho sasekhaya seselula ngokuchofoza okukodwa.
<b>Kungani ukhetha i-Opera Mini?</b>
► <b>Hlala ulandela idatha yakho</b> - Ungahlola ukonga kwakho kumenyu yamasethingi futhi ubone ukuthi ingakanani idatha i-Opera Mini ekongela yona.
► <b>Umsebenzi omningi</b> - Gcina amakhasi amaningi avulekile ngesikhathi esisodwa ngamathebhu.
► <b>Phequlula ngokungasese</b> - Sonke sinamakhasi esifuna ukukhmbula ukuwavakashela. Uma ungafuni okulondoloziwe kumlando wakho, ungaphequlula nge-incognito ngamathebhu ayimfihlo.
► <b>Ukulanda okuhlakaniphile</b> - Landa amafayela ngemuva bese ubambe ukuland amafayela amakhulu uze ubuye ku-Wi-Fi. I-Opera Mini izokwazisa ngokushesha uma ukulanda kwakho kuqedile. Vele uchofoze isaziso ukuze uvule ukulanda kwakho – akusekho ukugubha kumafolda.
<b>Ezinye izinto ezinhle</b>
✔ Londoloza amasayithi wakho ayizintandokazi: Thepha inkinobho <b>+</b> kubha yosesho ukuze ulondoloze ikhasi ku-Ukudayela Okusheshayo kwakho, lingeze kumabhukhmakhi akho eselula noma lifunde ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi.
✔ Thola izindaba zakamuva: Iphakheji yokuqalisa igcina yonke into endaweni eyodwa. Khetha izigaba ozithandayo futhi i-Opera Mini izokunikezela ngezindaba eziphezulu nokuqukethwe okusha kusuka kuyo yonke iwebhu.
✔ Vumelanisa amadivayisi akho: Zinike ukufinyelela kuwo wonke amabhukhmakhi, izinqamuleli zokuthi Ukudayela Okusheshayo futhi uvule amathebhu kusuka kuamdivayisi akho.
✔ Imodi yasebusuku: Fiphaza isikrini ukuze uvikele amehlo akho.
✔ Shintsha ukusesha kwakho: Nika injini yokusesha ehleliwe yezintandokazi zakho.
Landa i-Opera Mini bese uzame eyodwa yezindlela ezisheshayo zokuphequlula iwebhu kudivayisi yakho yeselula.
Lesi sibuyekezo sethula izimvume ezintsha. Ukuze ufunde kabanzi, bona inqubomgomo yethu yobumfihlo: http://www.opera.com/help/mini/android/permissions
I-Opera Mini ingabonisa izikhangiso kusuka ku-Facebook. Ukuze ufunde okunye, bona i-https://m.facebook.com/ads/ad_choices
Unemibuzo noma udinga usizo? Vakashela ku-http://www.opera.com/help/mini/android/
Thola izindaba zakamuva mayelana ne-Opera:
Ngokulanda lolu hlelo, uyavumelana nesivumelwano selayisense yomsebenzisi wokugcina ku-https://www.opera.com/eula/mobile. Futhi, ungafunda indlela I-Opera ephatha futhi evikela ngayo idatha yakho ku-https://www.opera.com/privacy.
Daily Free 50 GB Internet Data 4 Mobile phones
Mambo Bundle - Get up to 20GB free
True Caller ID Name & Location Info